Doorashada Guinea Bissau - BBC News Somali
Doorashada Guinea Bissau
Dadweynaha G Bissau qiyaastii waa 1.6 Million, waxaana wareegan 2-aad ee doorashada madaxweynaha ee maanta oo Axad ah dhacaysa ka codeynayey ilaa 800 oo kun oo qof oo kala dooranaya labada musharax ee kala ah Mario Vaz oo ahaan jiray wasiirka maaliyadda, wareegii horena guuleystay, iyo ninka loolanka kula jira oo ah musharax madax banaan oo la yiraa Nuno Gumes Namiyaam, oo wariyayaashu leeyihiin waxaa taageraya militriga dalka oo awood badan leh.
Dalka Guinea Bissau tan iyo xoriyadii 1974 ma jirto dawlad waqtigeedii dhammeysatay oo mid walba waxaa afgamabinayey militriga. Militriga dalka oo inqilaabkii u dambeeyey ku riday dawladii dalka 2012, dadku waxay rajeynayaan in doorashadani ay noqoto mid dalka xasillooni u horseeda.
Si xoog leh ayaa loogu soo baxay doorashada oo dadku safaf dheer dheer ayey ugu jireen goobaha laga codeynayo oo furnaan doona ilaa lixda maqribkii waqtiga Gghinea Bissau. Waxaa amniga sugaya 4 kun oo askari, waxaana dusha kala socda 245 kormeerayaal ka kala socda dalal kala duwan oo la geeyey goobaha cod bixinta.
Waxaana la filayaa in natiijada kama dambeysta ah ay soo bixi doonto maalmaha soo socda.